FIFIDIANANA BEN’NY TANANA : Véronique Zava no kandidan’IRD ao Fenoarivo-Atsinanana
Miisa 14 ireo Kaominina mandrafitra ny distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana. Ananan’ny vondron-kery IRD kandida avokoa izy 14 ireo. 12 septembre 2019
Ny tolakandron’ny alarobia 11 septambra lasa teo no nametraka antontan-taratasim-pilatsahan-kofidiana ireo kandida ben’ny tanàna avy amin’ny IRD ao anatin’ny distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana. Ho an’ny Kaominina Fenoarivo-Atsinanana tampon-tanàna, dia i Véronique Zava no kandida. Ity farany izay efa kandida solombavambahoaka farany teo tamin’ny lisitra tsy miankina. Porofo izao fa manao politikan’ny fisokafana ny IRD. Kandida mpifanandrina taminy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka lasa kandida amin’ny fifidianana izay ho ben’ny tanàna amin’izao fotoana izao.
Taoriany fametrahana dosie teny anivon’ny Ovec, nisy ny tafa fohy nataon-dramatoa Véronique Zava tamin’ny mpanao gazety. Nandritra izany no nilazany fa miainga avy amin’ny Kaominina ny asa fampandrosoana ny firenena ka izany no nahatonga azy nanolo-tena nirotsa-kofidiana. Izy rahateo izay mahafantatra tsara an’i Fenoarivo-Atsinanana. Nisaotra ny birao politikan’ny IRD ihany koa ny tenany tamin’ny fametrahana fitokisana taminy.
Hatramin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra (alarobia hariva), dia izy no kandida faharoa efa nametraka dosie teny anivon’ny Ovec ary izy ihany koa no vavy tokana. Efa nametraka ny azy i Moustapha avy amin’ny tsy miankina.